परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ? - Nepali Christians Site
परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ?
Posted by Resham Kumar sunuwar on September 24, 2013 at 8:00am
हामीले कतिपटक परमेश्वरलाई भुलेका हुन्छौं। परमेश्वरका बचन अनि उहाँको आज्ञालाई वेवास्ता गरीरहेका हुन्छौं। हामीले परमेश्वरको उपस्थितिदेखि टाढो भागीरहेका हुन्छौं। परमेश्वरले देखाउनुभएको असल कुरालाई नगन्यरुपमा लिईरहेका हुन्छौं। प्रार्थना गर्ने कुरा पनि भुलीरहेका हुन्छौं। यी सब कुराले जीवनमा असफलताको मार्गमा लगीरहेका हुन्छन्। परमेश्वरले देखाउनुभएको असल कुरा अनि उहाँले हामीबाट के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरालाई नबुझी आफ्नै इच्छा र बाटोमा हिंड्दा हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनपर्ने हुन्छ। निश्चय पनि परमेश्वर हामीबाट के चाहनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई असल कुरा देखाउनुभएको छ भनेर मिका अगमवक्ताले भनेका छन्।
“ए मानिस जे असल छ, त्यो उहाँले तँलाई देखाउनुभएको छ, र परमप्रभुले तँबाट के चाहनुहुन्छ? केवल यति, ठीकसित काम गर्नु,। कृपालाई प्रेम गर्नु र तेरा परमेश्वरसित विनम्र भएर हिंड्नु।” मिका ६:८।
मिका अगमवक्ताले यहूदाका जनसाधारणको लागि अगमवाणी गरेका थिए। मिका अगमवक्ताले यहूदा राज्यका जनसाधारणलाई यो अगमवाणी दिने बेलामा उता इस्राएल अश्शुरको दासत्वमुनि पर्न लागेको थियो। मिका नामको अर्थचाहिं “यहोवे जस्तो अरु को छ?” भन्ने हो। निश्चय पनि यस नामको अर्थले वताए जस्तै यहोवे परमेश्वर जस्तो अरु कोही पनि छैन। किनकि परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। हाम्रा जीवनमा कतिचोटी हामी बाटो विराएर हराएको यात्री जस्तै बनीरहेका हुन्छौं। कतिचोटी हामी जीवनमा अलमलीरहेका हुन्छौं। अनि कतिचोटी हामी के गर्ने के नगर्ने दोमन र शंका उपशंकाको भुँवरीमा अल्झीरहेका हुन्छौं। अनिश्चय अनि अलमलहरुको बीच मानिस भौतरीरहनुको के अर्थ हुन्छ। मिका अगमवक्ता भन्छन्, “ए मानिस जे असल छ, त्यो उहाँले तँलाई देखाउनुभएको छ, र परमप्रभुले तँबाट के चाहनुहुन्छ? केवल यति, ठीकसित काम गर्नु,। कृपालाई प्रेम गर्नु र तेरा परमेश्वरसित विनम्र भएर हिंड्नु।” मिका ६:८। ए मानिस जे असल छ, त्यो उहाँले तँलाई देखाउनुभएको छ। निश्चय पनि परमेश्वर उहाँको जनहरुलाई खराब कुराहरु देखाउनुभएको छैन। उहाँलै असलै कुराहरु देखाउनुभएको छ। तर त्यो असल कुराहरुको पहिचान गरेर त्यसलाई हाम्रो जीवनमा आत्मासात गर्नु जरुरी हुन्छ। हामीलाई जब बाइबलले स्पष्ट कुरा देखाउँछ अनि बताउँछ भने हामी हरेकको लागि साहयकसिद्ध हुँदछ। यहाँ मिका अगमवक्ताले जब अगमवाणी गर्दैछन्। यहूदाका मानिसहरुले परमेश्वरलाई बिर्सिएको अवस्था छ। परमेश्वरको वचन अनि व्यवस्थालाई भुलेका थिए। प्रार्थना गर्न अनि परमेश्वरको उपस्थितिका कुरा भुलेका थिए। परमेश्वरसँग कसरी पुकारा गर्ने अनि उहाँलाई खुशी तुल्याउने भन्ने कुराको ज्ञान हर्राईरहेका थिए। मिका अगमवक्ताका समयमा मानिसहरु परमेश्वरको कुरा नसुनी आफ्नै इच्छा र परमेश्वरलाई बिर्से पापमय जीवन जिएर असफल जीवन जिईरहेका थिए। जब मिका अगमवक्ताले यहूदाका मानिसहरुलाई अगमवाणी गरे, हरेक खण्डको शुरुवातमा “सुन” परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने अर्ती दिएका थिए। अनि उनले मिका ६:८ मा भनेका थिए, “ए मानिस जे असल छ, त्यो उहाँले तँलाई देखाउनुभएको छ, ….”
हो आज हामीले पनि परमेश्वरलाई भुलेका हुन सक्छौं। परमेश्वरमा प्रार्थना गर्न भुलेका हुन सक्छौं। परमेश्वरको बचन र आज्ञालाई वेवास्ता गरेका हुन सक्छौं। अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा जान भुलेका हुन सक्छौं। यद्यपि परमेश्वरले आज हामीलाई उहाँले जे कुरा असल हो, त्यो कुरा उहाँले हामीलाई देखाउनुभएको छ। अनि उहाँले देखाउनुभएको असल कुरा अनि असल मार्गमा हिंड्नु आज हाम्रो दायित्व र कर्तव्य हो। मिका अगमवक्ता भन्छन्, कि परमेश्वर हामीबाट के चाहनुहुन्छ ? “परमप्रभुले तँबाट के चाहनुहुन्छ…..” मिका अगमवक्ताले यहूदाका मानिसहरुलाई यही प्रश्नं. तेर्साएका थिए। जब मिका अगमवक्ताले यो प्रश्नं. राखे तब यहूदाका मानिसहरु मनमा यो कुरा उठयो होला। शायद परमेश्वरले पशुको बलिदान चाहनुभयो। हजारौं थूमाहरु परमेश्वरले चाहनुभएको होला। परमेश्वरले दश हजार नदीको तेल चाहनुभएको होला। पहिलो जन्मेको छोरा परमेश्वरलाई परमेश्वरमा अर्पण गरेका चाहनुभएको होला। के परमेश्वरले उनीहरुका पापबाट र्फकनलाई कुनै पशु वलिदान चाहनुभएको थियो? के परमेश्वरले यस्तै कुराहरु जो यहूदाका मानिसहरुले व्यवस्थाको रुपमा पालन गर्दै आईरहेका थिए, उनीहरुबाट चाहनुभएको थियो? यी सबै कुरा होईन। परमेश्वरले उनीहरुबाट के चाहनुभयो भन्ने कुरा त मिका ६:८ मा स्पष्ट बताईएको थियो। आज हामीबबाट परमेश्वर के चाहनुहुन्छ? यो कुरामा हामी निश्चित हुनर्ुपर्दछ।
मिका अगमवक्ताले यहूदाका मानिसहरुबाट परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ? भनेर बताएका थिए। केबल यति। अथवा परमेश्वर हामीसँग केवल यति चाहनुहुन्छ कि,
१, ठिकसित काम गर्नु
२, कृपालाई प्रेम गर्नु
३, तेरो परमेश्वरसित विनम्र भएर हिंड्नु
परमेश्वरले यहूदाका मानिसहरुसँग यी तीनवटा कुरा तिनीहरुले गरेको चाहनुभएको थियो। उनीहरु ठूला कुराहरु चाहनुभएको थिएन्। उनीहरुबाट वलिदानका कुराहरु चाहनुभएका थिएन। केवल यी तीन कुराहरु तिनीहरुबाट चाहनुभएको थियो। जो तिनीहरुले गर्नको निम्ति चुकीरहेका थिए। आज हाम्रो निम्ति पनि परमेश्वरको माग अनि चाहनुभएको कुरा यही हो। यो एउटा विश्वासीको लागि महत्वपूर्ण कुरा हो। परमेश्वरले आफ्ना बचनमा देखाउनुभएको कुरा हो। यी तीन कुराको विषयमा हामी चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्नेछौं।
१, ठिकसित काम गर्नु परमेश्वरले हामीबाट के चाहनुहुन्छ? केवल यति, कि ठिकसित काम गर्नु। मिका अगमवक्ताको समयमा मानिसहरु विभिन्न धार्मिक गतिविधिका कुरा मात्रै गर्ने तर परमेश्वरले चाहनुभएको कुरा नगर्ने प्रवृत्ति जो थियो आज पनि मानिस त्यही कुरामा नै वढी लिप्त भएको देखिन्छ। वास्तवमा परमेश्वरले हामीले ठिकसित काम गरेको चाहनुहुन्छ। किन हामीले ठिकसित काम गरेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ त? किनकि परमेश्वर ठिक अनि ठिक काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो ठिक काम गर्ने कुरा मात्रै नभएर यो व्यवहारमा उतार्ने कुरा पनि हो। ठिक काम गर्नु भनेको के हो? ठिक काम भनेको परमेश्वरको नजरमा जे जे कुरा ठिक छ जे पाप काम होईन। ठिक काम भनेको दुष्ट र अधर्म अनि अन्याय होईन। ठिक काम भनेको ठिक प्रकारको निर्णय ठिक प्रकारको न्याय, ठिक प्रकारको हिंर्डाई, ठिक प्रकारको जिवाई, ठिक प्रकारको बोलाई, ठिक प्रकारको अरुसँग व्यवहार आदि हुन। साँचो अनि सही र सत्य काम गर्नु भन्ने यसको अशाय हो। कतिचोटी हामी आत्मिक हिसावले वेठिक तरिकाले हिंडीरहेका हुन्छौ। जुन कुराले परमेश्वर खुशी हुनुहुन्न। उहाँले हामीबाट ठिक कामको माग गर्नुहुन्छ। यद्यपि हामी ठिक काम गर्नबाट चुकीरहेका हुन्छौ। हामी कति चोटी परमेश्वरको नजरमा बेठिक काम गरीरहेका हुन्छौं। आज हामी मध्ये कोही पनि यस्तो अनेक प्रकारका अधार्मिक, पाप अनि वेठिक काममा गरेर परमेश्वरलाई रिस उठाउदै छौं भने पश्चताप गरी हाम्रो व्यवहार परिवर्तन गरेर परमेश्वरले चाहनुभएको कुरामा अगाडि बढनु पर्दछ। हामीले परमेश्वरको नजर र उहाँको बचनअनुरुप ठिक जीवन जिउनर्ुपर्दछ। हामीलाई परमेश्वरले दोषरहित अनि सिद्द र पवित्र जीवन जिउन र त्यही अनुसार ठिक काम गर्नलाई परमेश्वरले बोलाउनुभएको हो। मिकाका समयमा मानिसहरु न्यायपूर्ण थिएनन।
तिनीहरु ठिक ढङ्गले चलेका थिएनन। तिनीहरु अरुहरुसँग ठिकसित न्योचित व्यवहार गरीरहेका थिएनन। तिनीहरु ठिक काम गर्नुपर्नेमा त्यसो गरीरहेका थिएनन्। परमेश्वरले हामी धार्मिक विधिविधान अनुसार मात्रै हामी सम्बद्ध भएको चाहनुभएको होईन तर हामी परमेश्वरको नजरमा हाम्रो आत्मिक जीवन र व्यवहार पनि ठिक र सही हुनुपर्ने हो भनेर भन्नु भएको हो। चर्च आउने, बाइबल पढने, आराधना गर्ने अनि अरु क्रियाकलापहरु सहभागी भईरहने तर ठिक प्रकारको काम नगर्ने, व्यवहार परिवर्तन नगर्ने अनि सही र न्योचित प्रकारको जीवन नजिउने हो भने यो विश्वासीको लागि असल कुरा हुँदै हुँदैन। परमेश्वरले त हामीबाट असल कुरा चाहनुभएको हो। उहाँले हामीले ठिक काम गरोस् भन्ने इच्छा हो। ठिक काम भनेको असल काम हो। ठिक काम भनेको सत्य अनि ज्योतिमा हिंड्ने कुरा हो। ठिक काम भनेको परमेश्वरको वचन अनुसार जिउनु हो। ठिक काम भनेको धार्मिकतामा जिउनु हो। ठिक काम भनेको हामी परेमश्वरको आज्ञा पालन गर्नु हो। शायद आज वेठीक काम र व्यवहार हाम्रो जीवनमा भईरहेको होला। परमेश्वरले हामीबाट चाहनुभएको कुरा यति हो कि हामीले ठिक काम गर्नुपर्दछ। हामीले परमेश्वरको नजरमा आप\_mना क्रियालाप र मनोवृतिहरु परिवर्तन गरी ठिक र धार्मिक र सिद्ध काम गर्नुपर्छ भन्ने हो।
२, कृपालाई प्रेम गर्नु मिका अगमवक्ताले बताएको अर्को कुराचाहिं परमेश्वर हामीबाट चाहनुभएको कुराचाहिं कृपालाई प्रेम गर्नु हो भनेर भनेका छन्। हामीसँग कृपा भएर मात्रै हुँदैन तर तर कृपालाई प्रेम गर्नुपर्दछ। यो कृपा भनेको के हो त? नेपाली वृहत शब्दकोशले कृपा भनेको करुणापूर्वक कसैमाथि गरिने दयामाया, अनुग्रह, निगाह, कृपा गर्ने, दयामाया गर्ने, कृपालु भनेर बताएको छ। कृपा भनेको एक किसिमको साहनुभूति जनाउने अनि क्षमादान दिने विधि हो। कृपाचाहिं दया माया देखाउने अनि धैर्य गर्ने कुरा पनि हो। कृपाचाहिं तीनवटा विशेषता र गुणले प्रेरित हुन्छ। क, दयामाया देखाउनु? दयामाया देखाउनु भन्नाले अर्को कोही व्यक्ति गहिरो समस्या र कठिनाईमा परीरहेको छ भने उसलाई सहयाता गर्न, मद्धत गर्नमा प्रेरित गर्दछ। यो दयामाया देखाउने कुराचाहिं आफ्नो कठिनाई र गार्हो कुरालाई पनि भुलेर अरुलाई सहायता गर्नमा लागी पर्ने कुरा हो। ख, क्षमादान? यो क्षमादिने कुराचाहिं हामीलाई बाधा दिने हाम्रा विरोधी अथवा हामीलाई नराम्रा गर्न खोज्नेलाई शत्रुको रुपमा हेर्नु अनि तिनीहरुलाई वदलाको भावना बोकेर हिंड्नु भन्दा क्षमादिने कुरासँग जोडिएको हुन्छ। ग, धैर्यता? रिस अनि कठिन समयमा पनि धैर्यता जनाउनु हो। कठिनाई हुनेभए तापनि कसैको समस्याहरुमा उसको पक्षमा उभिनु अथवा मद्धत गर्नु हो। हामी संसारमा कोही पनि सिद्ध छैनौं। हरेक मानिस पापी छ। केही न केही त्रुटी भुल जीवनमा भईरहन्छन्। यस अर्थमा हाम्रो सम्बन्धका कुराहरुमा कृपाचाहिं महत्वपुर्ण् कुरा हो। यदि परमेश्वरको कृपा हामीमाथि नहुने हो भने हाम्रो निम्ति यो निकै दुःखदायी कुरा हुनेथियो। तर परमेश्वरको कृपाको कारण नै हामी उद्धारको योजनामा परेका छौं। किनकि कृपाले हामीले आशा नै नगरेको प्रेमको भाव प्रदान गर्दछ।
कृपालाई प्रेम गर्नु अति नै महत्वपुर्ण कुरा अनि परमेश्वरको माग अनि चाहना पनि हो। कृपाको उदाहरण जस्तो नयाँ करार लूका १०:३०?३७ मा एउटा यात्री यरुशलेमदेखि यरिहोतिर जाँदैथियो। जसलाई डाँकाहरुले मरणसान्न हुने गरी पिटेर अनि लुटपाट गरी बाटोमा अधमरो पारेर छोडिदिए। त्यही बाटो भएर पुजहारी, लेवी आए। तर तिनीहरु त्यो दृष्य देखेर अकै बाटो तर्केर गए। तर एउटा असल समारी त्यो बाटो भएर आयो। यो दृष्य देखेर उसको मन दयाले भरियो। त्यसले तेल अनि दाखमद्य लगाएर त्यसका घाउहरुमा मलहम पट्टी बाँधीदियो। त्यसलाई आफ्नो गधामाथि चढाएर एउटा पौवामा राखेर हेरचाह गर्यो। अनि त्यस असल समारीले त्यो पौवाको मालिकलाई दुइ सिक्का दिएर राख्यो अनि उसलाई हेरचाह गर्ने जिम्मा दियो। बाँकी लागेको खर्च पनि म आएर तिर्छु भन्यो। अनि यशूले त्यो व्यवस्थाको पण्डित जसले येशूलाई परीक्षा गर्न आएको थियो उसलाई जाउ तिमी पनि त्यसरी दया देखाउन भनेर भन्नुभयो। परमेश्वरले हामीबाट के चाहनुहुन्छ त? परमेश्वरले हामीबाट कृपा चाहनुहुन्छ। हामीलो कृपालाई प्रेम गरेको चाहनुहुन्छ।
३, तेरो परमेश्वरसित विनम्र भएर हिंड्नु परमेश्वरले के चाहनुभएको हो त? मिका अगमवक्ताले भनेका छन्, कि तेरो परमेश्वरसित विनम्र भएर हिंड्नु। यहाँ मिकाको समयमा मानिसहरु परमेश्वरको नजरमा घमण्डी बनेर जिईरहेका थिए। उनीहरु धार्मिक र व्यवस्थाको कुराहरु जे जति गरे तापनि परमेश्वरको नजरमा घमण्डी भएर हिडीरहेको अवस्थामा यिनीहरुलाई परमेश्वरसँग विनम्र भएर हिंड्नु भनेर भनिएको थियो। वास्तवमा यो विनम्रता भनेको एउटा विश्वासीको जीवनमा हुनुपर्ने चरित्र हो। यदि मानिसले ठिक काम गर्छ अनि कृपालाई प्रेम गर्छ भने उ परमेश्वरसित विनम्र भएर हिंडन सक्दछ। परमेश्वरलाई नचिनेको मानिस अनि परमेश्वरलाई चिनेर पनि उहाँको वचनको आज्ञा पालन नगर्नेहरु ठिक काम गर्नु अनि कृपालाई प्रेम गर्नु कठिन कुरा हो। कृपालु अनि दयालु परमेश्वरलाई नचिनी कृपालाई प्रेम गर्नु असम्भव कुरा हो। मानिस आफैमा कति चोटी घमण्डको जालोमा बेरिएर जिईरहेको हुन्छ। परमेश्वरमा विनम्र भएर हिंड्नुको साटो आप\_mनै घमण्डका पोको बोकेर जर्वजस्ती जीवन घिर्साईरहेका हुन्छन्। परमेश्वरमा विनम्र भएर हिंड्नु भनेको निरन्तर चलीरहने र हिंडीरहने प्रक्रिया हो। परमेश्वरमा विनम्र भएर हिडने कुरा परमेश्वरमा ध्यान गर्नु, प्रार्थना गर्नु, समय बिताउनु भन्ने मात्रै नभएर यो हाम्रो जीवनको क्रियाकलापहरुमा देखिनु पर्ने कुराहरु हुन्। परमेश्वरमा विनम्र भएर हिंडनु भनेको हामीले आफ्नो शक्ति, स्रोत र साधानमा भरोसा राख्ने होईन तर परमेश्वरमा विश्वास गर्ने हो। उहाँमा भर पर्नु हो। परमेश्वरमा विनम्र भएर हिंडनु भनेको परमेश्वर बढनु अनि हामी घट्नु हो। कतिचोटी हाम्रो जीवनमा परमेश्वरलाई घटाएर हामी बढीरहेका हुन्छौं। यस्तो अवस्था आउनु भनेको समस्यामुलक अवस्था हो। जब हामीले हाम्रो जीवनमा उहाँलाई बढने अनि हामी घटने गर्र्छौ भने त्यो परमेश्वरमा हामी विनम्रतामा हिडीरहेको संकेत हो। हाम्रा घमण्डहरुलाई हामीले त्याग्नु पर्छ अनि परमेश्वरमा विनम्रतासाथ हिंडनु पर्दछ। हाम्रा जीवनमा घमण्डहरु टाँसीरहेका हुन्छन्। घमण्डकै कारण हामी परमेश्वरबाट टाढा गईरहेका पनि हुन सक्छौं। त्यसैले हामी परमेश्वरमा विनम्र भएर हिडनु जरुरी छ। जुन कुरा परमेश्वरले हामीसँग चाहनुभएको कुरा पनि हो। परममेश्वरसँग हिडनु अति असल कुरा हो। परमेश्वरसँग रहनु अति उत्तम कुरा हो। जब हामी विनम्रतामा हिंडछौं अनि जिउँछौ यसले हामीलाई फाईदा पुर्याउँछ। परमेश्वरसित विनम्र भएर हिंडनु भनेर जुन आग्रह गरिएको छ यो हरेक प्रभुका जनहरुका लागि चुनौतीपूर्ण कुरा छ। आज हामी कोसित कसरी हिंडीरहेका छौं? के हामी परमेश्वरसँग विनम्र भएर हिडीरहेका छौं कि अथवा घमण्डको जालोमा बेरिएर कतै पापको बन्धन र शैतानको पासोमा फसीरहेका छौं? परमेश्वरले घमण्डीहरुको विरोध गर्नुहुन्छ अनि नम्रहरुलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ।
आज हरेक विश्वासी परमेश्वरमा विनम्र भएर हिंडनु पर्छ। परमेश्वरले हामीबाट के चाहनुहुन्छ त? मिका अगमवक्ता जुन प्रश्नं यहाँ राखेका छन्। यो प्रश्नं साधारण छ तर यो शक्तिशाली प्रश्नं. छ। “ए मानिस जे असल छ, त्यो उहाँले तँलाई देखाउनुभएको छ, र परमप्रभुले तँबाट के चाहनुहुन्छ? केवल यति, ठीकसित काम गर्नु,। कृपालाई प्रेम गर्नु र तेरा परमेश्वरसित विनम्र भएर हिंड्नु।” मिका ६:८। केवल यति कि ठिकसित काम गर्नु, कृपालाई प्रेम गर्नु अनि तेरो परमेश्वरसित विनम्र भएर हिंडनु। यी तीनवटा चुनौतीपूर्ण र शक्तिशाली कुरा आज हाम्रो पनि महत्वपूर्ण छ। शायद हामी परमेश्वरले देखाउनुभएको असल कुरालाई भुलेका छौं। हामीले परमेश्वरले देखाउनुभएको असल कुरालाई त्यति चासो दिएका छैनौं। यहूदाका मानिसहरु जस्तै आफुले जे मन लाग्यो त्यही गरीरहेका छौं। आज त्यही प्रश्नं. जो मिका अगमवक्ताले सोधेका छन्, “परमप्रभुले तँबाट के चाहनुहुन्छ?” निश्चय पनि यो हाम्रो लागि अति नै महत्वपूर्ण पंश्नं. हो। के हामीले ठिक काम गरेका छौं? के हामीले कृपालाई प्रेम गरेका छौं? के हामीले परमेश्वरसँग विनम्र भएर हिंडेका छौं? हामीले वेठिक कामगरीरहेका छौं कि? हामीले कृपालाई वेवास्ता गरीरहेका छौं कि? हामी घमण्डी बनेर परमेश्वरसँग टाढो गईरहेका छौं कि? हामीले आफ्नो जीवनलाई जाँचबुझ गरी आफु कस्तो धरतालमा उभिएको हो? त्यो पहिचान गरी परमेश्वरमा ठिक जीवन जिउने काम गरौं। परमेश्वरले आशिष दिउन्।
रेशम कुमार सुनवार Views: 287
Comment by Resham Kumar sunuwar on September 28, 2013 at 11:43pm Thank you Raibhumika ji. God bless you too. Comment by bhumikala_thulung on September 28, 2013 at 6:09pm amen amen thankxalots resham sir for of the god powarful messege sharing with us god bless you all ways glary to god Comment by Resham Kumar sunuwar on September 26, 2013 at 8:40am thank you and God bless you Aruna rai ji. Comment by अरुणा राई ! on September 26, 2013 at 2:33am Brother Resham तपाईले ठीकै भन्नु भयो ! आज हरेक विश्वासी परमेश्वरमा विनम्र भएर हिंडनु पर्छ । पर्मेश्वरको ईच्छा अनुसारको जिनव जिउन सक्नु हाम्रो बुदिमता हो ! तर हामी कोहि जानी जानी कोहि अन्जानमा त कोहि जान्न नै नचाहेर हामी पर्मेश्वरको ईच्छाले होइन तर आफ्नै ईच्छाले आफुलाई जे ठीक लाग्छ त्यसै ईच्छा अनुसार जिई रहेको छौ यसैले पर्मेश्वरबाट पाउन पर्ने प्रसस्तै आशिष हामीले पाउन सकेको छैनौ ! तपाईको यस बल्ग पडेर धेरैले उप्रान्त पर्मेश्वरको ईच्छा हाम्रो जिवनमा के छ सो जान्ने कोशिस गर्नेछ भनेर ! May Lord Jesus Bless You . Comment by Resham Kumar sunuwar on September 25, 2013 at 7:51pm thank you aruna ji Comment by aruna chhantyal on September 25, 2013 at 6:36pm हामीले कतिपटक परमेश्वरलाई भुलेका हुन्छौं। परमेश्वरका बचन अनि उहाँको आज्ञालाई वेवास्ता गरीरहेका हुन्छौं। हामीले परमेश्वरको उपस्थितिदेखि टाढो भागीरहेका हुन्छौं। परमेश्वरले देखाउनुभएको असल कुरालाई नगन्यरुपमा लिईरहेका हुन्छौं। प्रार्थना गर्ने कुरा पनि भुलीरहेका हुन्छौं। यी सब कुराले जीवनमा असफलताको मार्गमा लगीरहेका हुन्छन्। परमेश्वरले देखाउनुभएको असल कुरा अनि उहाँले हामीबाट के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरालाई नबुझी आफ्नै इच्छा र बाटोमा हिंड्दा हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनपर्ने हुन्छ। निश्चय पनि परमेश्वर हामीबाट के चाहनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई असल कुरा देखाउनुभएको छ भनेर मिका अगमवक्ताले भनेका छन्।
ramro bachan Comment by Resham Kumar sunuwar on September 25, 2013 at 11:40am thanks Shrawan ji Comment by Shrawan Bomjan on September 25, 2013 at 8:25am ठिक काम गर्नु, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा, राख्नु उहाँको चरणमा भएर, रहनु, धेरै सुन्दर वचन, । परमेश्वरमा यो सबै कुराको साझे भएर ठिक जीवन जिउन सिकौ, सकौ, भनेर प्रार्थना गर्दैछु,! धन्यवाद दाजु, यो सुन्दर अनि जीवित परमेश्वरको वचनको लागि ! Comment by Resham Kumar sunuwar on September 24, 2013 at 7:40pm धन्यवाद है खिमनारायण जी Comment by Khim Narayan Shrstha on September 24, 2013 at 1:27pm Dherai ramro lagyo Resham ji. RSS